Global Voices teny Malagasy » Mahitsy Be Ilay Mpiasan’ny Firenena Mikambana Tamin’ny Fanombanany an’i Hongria · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 15 Marsa 2016 6:24 GMT 1	 · Mpanoratra Sara Heltai Nandika Nancy
Sokajy: Eoropa Afovoany & Atsinanana, Hongria, Fahalalahàna miteny, Fampandrosoana, Fifandraisana iraisam-pirenena, Fifindràmonina, Fitantanam-pitondrana, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Politika, Vehivavy sy Miralenta, Zon'ny Nanova na Mpitia Mitovy Fananahana (LGBT), Zon'olombelona
Michel Forst. Sarin'ny Firenena Mikambana / Jean-Marc Ferré. CC 2.0.
Nanakiana mafy ny fitondrana Hongroà ilay lehilahy voatendry hisahana ny fanarahamaso ny fiarovana ny zo fototra maha-olona manerantany ao amin'ny Firenena Mikambana.
Tamin'ny fiandohan'ny volana Febroary, noho ny fanasàn'ny governemanta Hongroà dia tonga tany Hongria hanao fitsidihana sivy andro i Michel Forst, ilay mpampakateny manokan'ny Firenena Mikambana. Taorian'ny fihaonana niarahana tamin'ny solontenan'ny governemanta, ny fitsaràna, ny mpanelanelana Hongroà ary ireo mpiasam-panjakana ambony, dia niresaka tamin'ny mpianatra amin'ny ambaratonga ambony, ny mpiasan'ny ONG, ary ireo mpiaro ny zon'olombelona samy hafa any Budapest i Forst, nitsidika ireo tanàn-dehibe hafa manerana ny firenena ihany koa izy.
Tamin'ny fiafaràn'ny fitsidihany, nanao fanambarana sava ranonando manameloka ny fampihorohoroana sy ny fanilikilihana atao an'ireo mpiaro ny zon'olombelona any Hongria i Forst. Niantso ny governemanta izy mba hampiditra ny fiarovana ny zon'olombelona ho ao anaty rafi-panjakana sy rafitra politika ary hanao politika hiantoka ny fahaizamanaon'ireo mpiaro ny zon'olombelona mba hiasa ao anaty tontolo tsara tohana ara-drafitra. Notoroan'ilay mpiasan'ny Firenena mikambana hevitra ihany koa ireo Hongroà mpanao lalàna mba tsy hanameloka ireo hetsika am-pilaminana sy ara-drariny ataon'ireo olona miasa ho an'ny tombontsoan'ny zon'olombelona.
Noderain'i Forst ny fahombiazan'ireo vondrona, tamin'ny fanamarihana fa “mitombo hatrany miasa ao anaty tontolo mifandrirotra sy vonton'ny politika ireo mpiaro [ny zon'olombelona]”, tontolo iatrehan'izy ireo fanamby goavana, izay ” toa hitangoronan'ny fanitsakitsahana ny zo fototra sy ny fahalalahan'izy ireo ary ny zo ara-drariny hampiroborobo sy hiaro ny zon'olombelona.”
Ny fanamby tahaka izany dia ahitana ny fanalefahana ny rafitry ny lalàm-panorenana  sy ny tany tàn-dalàna, tahaka izany koa ny fampidirana ny lalàna izay mampihisatra ny fahalalahana maneho hevitra , fahalalahan'ny fanomezam-baovao , fahalalahan'ny fikambanana , fahalalahan'ny fivoriana  ary ny fidirana amin'ny fitsarana. Miatrika loza mitatao goavana sy tratry ny fanilikilihana bebe kokoa ireo vondrona manokana mpiaro ny zon'olombelona, toy ny vehivavy ( indrindra fa ireo izay manao fanentanana momba ny zo mahakasika ny firaisana ara-nofo sy fananahana), ny LGBTI, ary ireo Roma mpiaro ny zon'olombelona. Matetika miaritra fanenjehana sy valifaty ireo mpiampanga sy ireo izay miasa amin'ny resaka fangaraharana sy ady amin'ny kolikoly.
Nolazain'ireo fikambanana Hongroà ny fidinan'ny famatsiambola na ny fahatapahany taorian'ny nidirana amin'ny fitondrantena lazaina ho manohitra ny governemanta. “Koa satria mandalo ao amin'ny antokon-draharaha fehezin'ny governemanta ny fidirana amin'ny famatsiambolan'ny Vondrona Eoropeana, dia ampiasaina ho fitaovana hampanginana ny mpanohitra na hamporisihana ny fanaovana sivana ny tenany [izany]”. Mety hiatrika olana ara-tsosaly ihany koa ireo mpikatroka no sady hahatsapa ho mitoka-monina amin'ny asany satria ” ohatra ny tsy tsara fototra any amin'ny fiarahamonina ireo ONG, no sady tsy ampy fanohanana avy amin'ny fiarahamonina amin'ny ankapobeny ho fanaovany ny asany.”
Raha velabelarina, dia nanoro hevitra ny governemanta i Forst mba hanaraka ireo fanatsaràna ny rafitra sy ny andrim-panjakana sasany. Nasainy namafisina ny biraon'ny mpanelanelana, amin'ny fiantohana ny fizakàntena ara-bolan'ilay birao, amin'ny fanarahana sy fanatanterahana ny torolàlana efa misin'ny Mpanelanelana. Tokony omena toerana ny mpitsara, hoy i Forst, mba hiantoka ny fahaleovantenan'ny fampandehanan-draharaha, ary mila antokon-draharahanà nasionaly mahaleotena mpiampanga i Hongria mba hanohana sy hiaro ireo mpanome vaovao vonona. Niantso ny hanaovana fanitsiana ny Lalàna momba ny fahalalahan'ny fanomezam-baovao ihany koa i Forst mba hanatsaràna ny fahazoan'ireo mpanao gazety sy mpikatroka mpiaro ny zon'olombelona.
Nanolo-kevitra ireo mpikambana ao amin'ny fiarahamonim-pirenena ihany koa i Forst, tamin'ny filazàny tamin'izy ireo ny handalinana ny tambajotram-pirenena sy ny tambajotran-dry zareo ao an-toerana, ary mba hampiasa ireo fomba manokan'ny Firenena Mikambana ( sy ireo rafitry ny fomba fiasa iraisam-pirenena sy Eoropeana momba ny zon'olombelona ) rehefa misy tatitra momba ny heloka bevava na fandikàn-dalàna.
Farany, namporisihan'ilay mpiasan'ny Firenena Mikambana ny vondrona iraisam-pirenena mba hanome hery sy hanohana ireo Hongroà mpiaro zon'olombelona, tamin'ny fiantsoana ny Vondrona Eoropeana mba ” hanitsy ny politikany momba ny famatsiambola ireo fikambanana fiarahamonim-pirenena manokana, amin'ny alàlan'ny tetibolam-panjakana ihany ary hitrandraka fidirambola fanampisy sy azo atao fanolo ho an'ireo fikambanana fiarahamonim-pirenena rehetra.”
My preliminary observations on the situation of human rights defenders in #Hungary  https://t.co/ScfGx3B5cq 
— Michel Forst SR HRD (@ForstMichel) February 16, 2016 
Ao amin'ny https://t.co/ScfGx3B5cq ny fanamarihana sava ranonando nataoko momba ny zava-misy iainan'ny mpiaro ny zon'olombalona ao #Hongria 
Azo vakiana eto ny lahatsoratra manontolon'ny tatitra amin'ny teny Anglisy  ( miaraka amin'ny dikany azo sintonina amin'ny fiteny Hongroà ihany koa ) nataon'i Forst. Amin'ny Filankevitry ny Firenena Mikambana atao any Zeneva amin'ny Martsa 2017 no hanoloran'i Michel Forst ny tatitra farany.
Michel Forst seems to have pulled no punches in his assessment of #civicspace  in #Hungary  https://t.co/tqkRMeDoP4  @CIVICUSalliance 
— Cathal Gilbert (@gilbertcathal) February 18, 2016 
Ohatra tsy nitsitsy i Michel Forst tamin'ny filazàny ny vokatry ny fanombànany ny #habaka sivily  ao #Hongria  @CIVICUSalliance 
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2016/03/15/79630/
 rafitry ny lalàm-panorenana: http://bbj.hu/politics/tasz-hungarian-authorities-‘continuously-infringe-freedom-of-press_104470
 ahalalahana maneho hevitra: http://www.reuters.com/article/us-hungary-media-insight-idUSBREA1I08C20140219
 fahalalahan'ny fanomezam-baovao: https://www.indexoncensorship.org/2015/07/hungary-government-cracks-down-on-freedom-of-information/
 fahalalahan'ny fikambanana: http://english.atlatszo.hu/2014/09/09/hungary-continues-campaign-against-ngos-with-massive-police-raid/
 fahalalahan'ny fivoriana: http://bbj.hu/politics/tasz-hungarian-authorities-%E2%80%98continuously-infringe-freedom-of-press_104470
 fidirana amin'ny fitsarana. : http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20151210IPR06854/Hungary-MEPs-call-for-threats-to-the-rule-of-law-to-be-monitored
 https://t.co/ScfGx3B5cq : https://t.co/ScfGx3B5cq
 February 16, 2016: https://twitter.com/ForstMichel/status/699631294607683586
 February 18, 2016: https://twitter.com/gilbertcathal/status/700408654630166528